I-iPhone ikhiyiwe yi-IMEI - thola ukuthi ngabe i-iPhone intshontshiwe
I-iPhone ikhiyiwe yi-IMEI
Kuleli khasi ungakwenza thola ukuthi ngabe i-iPhone ikhiyiwe yi-IMEI. NOMAn I-iPhone ingakhiywa yi-IMEI ngoba iyiyo yebiwe, ilahlekile noma ngenxa yesikweletu esisebenzisana naye.
Bheka ukuthi bakuthengisela i-iPhone ebikiwe ngaphambi kokuyithenga. Ama-iPhones akhiyiwe nge-IMEI awakwazi ukusetshenziswa nanoma yisiphi isithwali futhi ezimweni eziningi awakwazi ukuvulwa.
0.1 IPhone ikhiyiwe noma intshontshiwe?
1 Ungazi kanjani ukuthi ngabe i-iPhone intshontshiwe
2 Ungakwazi ukuvula i-iPhone ekhiywe yi-IMEI?
IPhone ikhiyiwe noma intshontshiwe?
Sebenzisa ifomu elilandelayo ukuthola ukuthi ngabe i-iPhone ikhiyiwe noma yebiwe:
Uzothola yonke idatha ye-iPhone ku-imeyili ehambisana ne-akhawunti yakho ye-Paypal noma i-imeyili oyibhalayo uma ukhokha ngekhadi lesikweletu. Imvamisa uzothola imininingwane kungakapheli imizuzu engu-5 kuye kwengu-15, kepha ezimweni ezithile kungahle kube nokubambezeleka okufika emahoreni ayisithupha.
Umbiko ozowuthola uzofana nalona:
Inombolo Yomkhiqizo: AB123ABAB12
Imodeli: IPHONE 5 16GB EMNYAMA
I-IMEI imakwe njengebiwe / ilahlekile ku-Apple database: Cha / Yebo
Futhi uma ufisa ungabheka nokuthi ngabe kunjalo ikhiyiwe yi-iCloud, ivelaphi i-iPhone yakho, uma inenkontileka engunaphakade futhi uma kungaba njalo vula nge-IMEI Ngokukhetha inketho ekudonseleni phansi kokukhokha, kuzodingeka ukhokhe imali ethe xaxa ukunweba lolu lwazi.
Ungazi kanjani ukuthi ngabe i-iPhone intshontshiwe
Kubaluleke kakhulu ukuthi uma uthenga idivaysi entsha ephathekayo ye-Apple iPhone sithole kahle ukuthi le iPhone ikhiyiwe yi-IMEI. Isizathu esikhulu esenza izinkampani zikhethe ukuvimba ifoni ephathekayo ngekhodi yayo ye-IMEI ngoba umnikazi wayo uyibeke ngephutha noma wayintshontsha ngokungemthetho. Kungakho-ke kufanele siqiniseke ngokusebenza kwekhodi ye-IMEI exhunywe kudivayisi, ngaleyo ndlela siqinisekise ukuthi imvelaphi yayo isemthethweni ngokuphelele.
Yingakho insizakalo esiyinikezayo izokuvumela ukuthi uthole ngomzuzwana nje ukuthi i-iPhone ohlela ukuyithenga ivinjelwe i-IMEI noma cha. Ngakho-ke ukuvimbela ukukhwabanisa okungenzeka nokutholwa kwedivayisi okunemvelaphi engekho emthethweni.
Ungakwazi ukuvula i-iPhone ekhiywe yi-IMEI?
Ngokuvamile, yizinkampani zocingo ezinamandla okukhiya nokuvula amadivayisi ngekhodi ye-IMEI. Kungakho, uma sifuna ukuvula i-iPhone eyayivinjelwe ngaphambilini yi-IMEI, sizoya ngqo enkampanini yezingcingo ebhekele ukuvinjelwa, ukuqinisekisa ngokusemthethweni ukuthi idivayisi itholakele futhi isezandleni zomnikazi wayo osemthethweni, isibonelo, ungasebenzisa ama-invoyisi wokuthenga afanele.
Kungenxa yalokhu okushiwo ngenhla, ukuthi sikunikeza le sevisi ezokunikeza ithuba lokwazi ngokushesha uma ngabe I-iPhone ohlela ukuyithenga ikhiyiwe nge-IMEIMane nje ugcwalise imininingwane ehambisana nekhodi ye-IMEI yedivayisi ofuna ukuyithenga ngale ndlela elandelayo, kanye ne-imeyili ofuna ukuthola ngayo umbiko wempendulo lapho uzokwazi khona isimo se-IMEI block. Ngokugcwalisa imininingwane esefomini kuphela lapho uzothola khona i-imeyili enombiko wedatha eceliwe kungakapheli imizuzu eyishumi nanhlanu (kwezinye izimo ezithile kungabambezeleka kuze kufike emahoreni ayisithupha).